Edeturu na Nyochaa nke Lighting a Bonfire site Jack London - Ikkaro
Inicio >> Akwụkwọ >> Mee ka Jack London gbaa ọkụ
Mee ka Jack London gbaa ọkụ
Enwerela m ohere nke ụzọ Filomena site na peninshula na nnukwu tụlee na okpomọkụ iji gụgharịa Nwuo ọkụ nke Jack London dere.
Dị ka ya na Ithaca uri ọ bụ obere akụkọ etinyere na mbipụta
Oge a mbipụta m zụtara na Alaeze Cordelia nke ahụ na-abịa na ihe osise nke Raúl Arias na ntughari nke Susana Carral. Mbipụta a gụnyekwara akụkọ abụọ Lighting a Bonfire nke Jack London dere. 1907 nke bu nke onye obula ma ma ihe osise di na akwukwo a dabere na ya na 1902 e nke etinyekwara dika mgbakwunye na nke bu uzo mbu o dere maka akwukwo edemede. Onye Ntorobịa.
Ị nwere ike zụta ya ugbu a na € 7
Ntugharia sitere na oru nke Mahadum Stanford guzobere na ya Akwụkwọ Canonical nke Jack London's Complete Stories.
Na 1907 o degharịrị ya maka Century Magazine na 1910 e chịkọtara ya na Lost Face volume.
Ihe atụ ndị a nke Raul Arias Ahụla m ha na mbipụta nke ụlọ akwụkwọ King Lear na mkpuchi siri ike na nke ka ibu. Ọ bụ mpịakọta m tụtụrụ n'ọbá akwụkwọ ọha, nke mbụ m gụrụ ya. Mgbe nke a gasịrị, achọtara m ụdị Reino de Cordelia na m mechara zụrụ onwe m.
N'otu ụzọ, ha na-echetara m ihe atụ Agustín Comotto maka Njikọ 20.000 nke njem ụgbọ mmiri, Akwụkwọ kasị amasị Verne ruo ugbu a.
Ọ bụ akụkọ a na-agụ n’otu oche, n’oge ụbọchị oyi. Ọ bụ akụkọ magburu onwe ya, nke siri ike na-eme ka itinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ nke protagonist ma hụ nhụjuanya ya, nhụjuanya ya. Ọ na-egosipụta obi ọjọọ nke ebe ndị a adịghị mma. Ọdịdị nke dị n'ọhịa na otu onye dị ntakịrị ma bụrụ onye na-enweghị nchebe.
Versiondị nke 1907 yiri ka ọ ka m mma n'ụzọ niile. Na enweghi mkparịta ụka ma na ị na-ahụ echiche nke onye protagonist na-eme ka ị mikpuo onwe gị na akụkọ ahụ. Ọdịdị nke nkịta na-eso ya n'oge njem ahụ dị m ezigbo mma na nke na-efu mgbe ị gụrụ ụdị nke mbụ.
Ọ bụ ụzọ dị mma iji bido ịgụ London. Ọrụ a nwere nnukwu myirịta na Oku nke ohia y White tusk. Ọrụ ọzọ nke onye edemede ahụ nke m gụrụ ọtụtụ afọ gara aga na m chọrọ inwe bụ Na-awagharị awakpando.
Mgbe ọ dị afọ iri abụọ na otu, London gara Alaska ịchọ ọla edo, nwee mmetụta ma bie oyi na mpaghara nke Klondike. O biri ndụ ezigbo oyi na onye mbu, ọ gagharịrị n'oké ọhịa ndị ahụ na ahụmịhe ahụ niile ka edepụtara na akụkọ a.
Thingsfọdụ ihe dị omimi anakọtara site n'akwụkwọ ahụ.
Site na 45ºC n'okpuru efu ọ dị mkpa iji njem mmadụ
Ha na-eji tinder emere site na osisi birch. Aghaghị m inyocha isiokwu a.
Eziokwu ndị ọzọ na-adọrọ mmasị
Igwe ikuku kachasị dị ala nke edepụtara na ụwa site na ọdụ ihu igwe bụ -89,2ºC. Edere ya na Russia na East Antarctica, na isi ala Vostok (Isi Iyi National Geographic). Mana na nyocha nke 2018 na Geophysical REsearch Letters (Ultralowface Temperatures na East Antarctica Site na Satellite Thermal Infrared Mapping: Ebe Kachasị Nzuzo na Earthwa) Ndị ọkà mmụta sayensị na-enyocha data satịlaịtị hụrụ okpomọkụ nke -90ºC
Mmiri mmiri ozuzo
Enelọ ahịa akwụkwọ Penelope Fizgerald
Esi dezie ihe oyiyi na ogbe ma ọ bụ ogbe (ya mere ...
Iacobus nke Matilde Asensi dere
Midwife toad (Alytes ndị na-amụ nwa)
Ọgbaghara. COVID-19 na-eme ka ụwa maa jijiji
Categories Akwụkwọ Igodo bọtịnụ
LEGO Boost agaghị ejikọ Bluetooth
Kedu ihe bụ LEGO Boost
2 Ọrụ ahụ
3 Ihe edeturu
4 Eziokwu ndị ọzọ na-adọrọ mmasị